IGeorgetown | Izindaba Zokuhamba
Isithombe | UKristopher Anderson Wikimedia Commons
IGeorgetown phambilini yayihlukaniswe maphakathi neWashington futhi iminyaka eminingi kwakuyindawo yokuhlala osomaqhinga nabantu abasebenza kuhulumeni kepha, ngenxa yokuthi yayiseduze nenhlokodolobha nokwanda kwezibalo zabantu, yagcina iba ngenye yezindawo ezibaluleke kakhulu omakhelwane enhlokodolobha.
Kutholakala empumalanga yedolobha eliseduze neGlover Park, eduze kakhulu kweDupont Circle neFoggy Bottom indawo yaseGeorgetown. Iphawuleka ngemigwaqo yayo eboshwe ngamatshe, ukwakhiwa kwayo kusukela ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX nangaleyo nhlanganisela enhle kakhulu yakudala neyintsha. Imigwaqo igcwele impilo futhi umoya unobungane kakhulu.
Eyasungulwa osebeni loMfula iPotomac ngo-1751, idolobha laseGeorgetown landulela ukusungulwa kweWashington, laba ngelinye lamadolobha amakhulu eMaryland laze lafakwa esifundeni saseColumbia. Ngakho-ke, lo makhelwane unomlando othakazelisa kakhulu ongawufunda ngohambo lokuhamba ngezinyawo emigwaqweni yalo, ucabanga ngezindawo ezinhle zamatshe zaseGeorgia nezindlu ezenziwe ngezitini.
Ekuhambeni kwakho uzungeze indawo yangakini, ungaya esikhungweni sezivakashi saseGeorgetown kuThomas Jefferson Street ukuze uthathe imephu futhi uhlole lapho uziphumulele, noma uthathe uhambo lokuholwa mahhala emini ehlobo. Ngale ndlela uzokwazi isakhiwo esidala kunazo zonke eWashington, i-Old Stone Houde, esabuyela emuva ku-1765 futhi ukubukeka kwayo kuhlala kungashintshi. Namuhla ingumnyuziyamu womphakathi onamakamelo ahlotshiswe ngesitayela sobukoloni besigaba esiphakathi.
Okunye ukuvakasha okunenzuzo yiCity Tavern Club, indawo lapho obaba abasunguli base-United States babevame ukudla khona.: UGeorge Washington, uThomas Jefferson noJohn Adams.
Futhi iTudor Place House and Garden, isikhala esasiphethwe yisihlobo sikaGeorge Washington lapho ungabona khona izingcezu zobuciko nefenisha ezingaphezu kwezingu-8.000 kusukela ngekhulu le-XNUMX bese uhamba ngamahektha amabili ezingadi ezinhle.
Enye indawo onentshisekelo ukuyivakashela eGeorgetown yiCustom House nePosi, okungenye yezakhiwo zeposi zokuqala ukwakhiwa e-United States.
Isithombe | UMarjord Wikimedia Commons
Futhi budebuduze nesikhungo sezivakashi kubuye kube neChesapeake ne-Ohio Canal (C&O) yoMfula iPotomac, owawuxhumanisa amadolobha eWashington DC naseCumberland (Maryland) phakathi kuka-1831 no-1924. Yakhiwa ukuthutha amalahle, ukhuni neminye imikhiqizo njengenye indlela eya ePotomac, ehambisana nomsele. Indlela enhle yokwazi umsele ngebhayisikili ukujabulela imisele yalo engokomlando, ukukhiya izindlu nezigayo.
Ngakolunye uhlangothi, cishe amakhilomitha amathathu ukusuka enkabeni yeWashington yiGeorgetown University, isikhungo semfundo esidala samaKatolika e-United States esasungulwa ngo-1789.
Ngaphezu kwamaphuzu amaningi omlando onentshisekelo kuwo, iGeorgetown futhi iyindawo enhle yokuthenga nokujabulela ukudla okuhle ezitolo nasezitolo zokudlela ezihlukile, ikakhulukazi emigwaqweni iWisconsin neM. Akujwayelekile ukuthi uhlangane nabaculi basemgwaqweni nabadlala ngaphandle.
Ngenye indlela, ungavakashela ipaki elisemfuleni iGeorgetown ukuze uthole ukudla okuphumuzayo ngenkathi ubuka uMfula iPotomac.
Ukuze uthole isidlo sothando endaweni ehlukile, zama i-1789 Restaurant, indawo yokudlela enomlando emgwaqweni othule waseGeorgetown, noma zama iFarmers, Fishers, Bakers, indawo yokudlela yasemanzini egxile ekusimameni. Phakathi nezinyanga ezifudumele zonyaka, izindawo zokudlela eziseGeorgetown Waterfront zonke ziwulaka, zinikeza izihlalo zangaphandle ngemibono emihle yoMfula iPotomac.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Georgetown
Ungadla kuphi eMadrid? Izindawo zokudlela eziyi-9 ezinconyiwe edolobheni